The Hague iyona lombuso kwa-Netherlands, ngakho ungalindela ukubona eziningi izakhiwo umxhwele. Umuzi futhi indawo International Court of Justice, okungenye kumele-ubone indawo.
Yize kunjalo, Germany namanje kuwufanele ngokuvakashela. Lokho kunjalo ikakhulukazi uma unquma ukuya Cologne, i gem ngokuvamile ukhohliwe laseNtshonalanga Jalimane. Ubuhle idolobha amanga ku osebeni ngokulinganayo omangalisayo Rhine River. Ngaphezu kwalokho, ICologne iyisikhungo somnotho, isiko, nezokuvakasha laseNtshonalanga Jalimane.
Daytrips europetravel Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelamsterdam imvuenline phungingland travelgermany travelnetherlands travelparis